Yakanyanya njodzi huru: Hong Kong inorambidza vese vafambi kubva kuUK
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hong Kong Kupwanya Nhau » Yakanyanya njodzi huru: Hong Kong inorambidza vese vafambi kubva kuUK
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hong Kong Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo Hong Kong ichitsvaga kudzikamisa kupararira kwemhando dzakasiyana dzeCOVID-19, vakuru veSAR vakaisa UK se "njodzi yakanyanya".
Vanhu vakagara muUK kweanopfuura maawa maviri vachabvumidzwa kukwira ndege dzevapfuuri kuenda kuHong Kong.
Hong Kong yakasimbisa yayo yekutanga yemunharaunda Delta musiyano COVID kesi svondo rapfuura.
Kubhururuka kweUK kubhururuka kunouya sezvo Hong Kong iri kutsvaga kuzorora kwega kwega matanho kune dzimwe nyika zhinji.
Hong Kong Hurumende yakazivisa neMuvhuro kuti ndege dzese dzevanofamba kubva kuUK dzicharambidzwa kubhururuka kuenda kuHong Kong Special Administrative Dunhu kutanga China.
As Hong Kong inotsvaga kudzikamisa kupararira kwemhando dzakasiyana dzeCOVID-19, vakuru veSAR vakaisa UK se "njodzi yakanyanya" nekuda kwe "ichangoburwa denda iri muUK uye nehutachiona hweDelta hwakasiyana ipapo".
Pasi pechikamu chitsva, vanhu vakagara muUK kweanopfuura maawa maviri vachabvumidzwa kukwira ndege dzevapfuuri kuenda kuHong Kong.
Hong Kong yakasimbisa yayo yekutanga yemunharaunda Delta musiyano COVID kesi svondo rapfuura, ichipedza 16-mazuva streak e zero zero kesi.
Chibvumirano chitsva inguva yechipiri hurumende yeHong Kong ichirambidza ndege kubva kuUK, zvichitevera chibvumirano chakatemwa Zvita apfuura.
Kurambidzwa kunouya pakati pekunetsana kwakanyanya pakati peUK neChina pamusoro peiyo semi-yakazvimirira Hong Kong.
Kurambidzwa kwendege kwakakonzerwa nemutemo wakaiswa nehurumende kudzivirira coronavirus akasiyana kubva kuHong Kong.
Kumiswa kwendege dzevapfuuri kunoiswa kana vashanu kana vanopfuura vafambi vanosvika kubva panzvimbo imwechete vakaedzwa pavasvika kune imwe coronavirus musiyano, kana inoenderana hutachiona hutachiona mukati memazuva manomwe-mazuva.
Kurambidzwa kunopihwawo kana gumi kana vanopfuura vatakuri kubva panzvimbo imwechete vakasimbiswa kutapukirwa necoronavirus kuburikidza nechero bvunzo, kusanganisira bvunzo dzinoitiswa panguva yekuisa vanhu voga, mukati memazuva manomwe.
IUK yakazivisa vanhu makumi masere nemazana masere nevapfumbamwe nevatanhatu vakaedzwa hutachiona hweCoronavirus nemusi weSvondo, sezvo ichiona kuwanda kwezvirwere. Yakasimbisa anopfuura mamirioni mana emakesi kubva pakatanga denda iri.
Hong Kong, iyo kwemwedzi yakamisikidza yekuvharirwa kwemazuva makumi maviri nemasere kwevanosvika kubva munyika zhinji uye yakazadzisa mirau yakaoma yekuparadzanisa magariro, yakamhan'ara nyaya nhatu nyowani dzecoronavirus neMuvhuro. Inosimbisa huwandu hwezviuru gumi nemazana mapfumbamwe negumi nemakumi mapfumbamwe nemaviri kubva pakatanga denda iri.
Kurambidzwa kwendege kuUK kunouya sezvo Hong Kong iri kutsvaga kuzorora kwega kwega matanho kune dzimwe nyika, kusanganisira US neCanada.